People Archives — यात्रा ली - आधिकारिक साइट
मान्छे मान्छे मान्छे मान्छे मान्छे मान्छे मान्छे मान्छे मान्छे मान्छे मान्छे मान्छे मान्छे मान्छे
म हाम्रो जीवन को लागि परमेश्वरको इच्छा छलफल मन, जब पनि कुनै यो बारेमा मलाई असहमत. कुराकानी वास्तविक काल वास्तविक छिटो हुनत-विशेष गरी हामी विवादास्पद मुद्दाहरू कुरा गर्दा प्राप्त गर्न सक्छन्. यो कसैले बताउन उनीहरूले गलत हुनुहुन्छ लाग्छ भनेर कहिल्यै मजा छ. त्यसैले म मेरो शब्दहरू होसियार प्रयास, र बस परमेश्वरले भन्छन् के कुरा, बरु मेरो आफ्नै राय भन्दा. घडी को कल जस्तै, हुनत, कुराकानीमा समयमा केही बिन्दुमा, तिनीहरूले ट्रम्प कार्ड बाहिर निकाल्न छौँ: "तर बाइबल पनि छैन न्याय गर्न भन्न गर्दैन? तपाईं सजिलै कि पद भन्दा छोडियो, हा?"यो कहिल्यै असफल.
मत्ती मा7येशू भन्नुहुन्छ, "इन्साफ नगर्नुहोस्, वा तपाईंले पनि न्याय हुनेछ। "समेत बाइबल कहिल्यै पढ्न गरेका हामी ती शब्द को लागि आफ्नो प्रवचन शब्द को यो भाग उद्धृत गर्न सक्छन्. यो हाम्रो दिन मा सबै भन्दा प्रसिद्ध बाइबल पद हुन सक्छ. र यो पनि सबै भन्दा गलत समझ बैठी हुन सक्छ
यो पद गलतफहमी हामी एकअर्कालाई प्रेम मानिन्छ छौं कसरी गलत अर्थ लाउनु अर्थ. त्यसैले प्रश्न महत्त्वपूर्ण छ: उहाँले न्याय गर्न हामीलाई बताउँछ जब येशूले अर्थ के?
उहाँले के होइन
पछिल्लो सप्ताह, मेरी श्रीमती र म हाम्रो चर्च मा एक विवाह कार्यशाला उपस्थित. हामी हरेक मार्फत हिंडे रूपमा…
कसैले नाम droppers रुचि. तपाईं म कुरा गर्दैछु जो थाह. जो तपाईं चाहनुहुन्छ ती मानिसहरू तपाईं शायद जान्न चाहन्छु कि मान्छे थाह थाह. म "namedropper लाग्छ जब,"त्यहाँ मनमा तुरुन्तै आउँछ कि एक मान्छे हो. म मात्र उहाँलाई पटक एक मुट्ठी भेट गर्नुभएको, तर हरेक समय हामी कुरा गर्नुभएको, हाम्रो कुराकानी आधा सरासर नाम थोपा साथ अँगालेका छ.
उहाँले "ठूलो समय" मान्छे को राम्रो नम्बर थाह, र उहाँले कुनै पनि कुराकानी ती नाम सुटुक्क छिर्ने एउटा निरर्थक क्षमता छ. यहाँ एउटा उदाहरण छ. म भन्छु, "अरे मानिस, कति बज्यो?"उहाँको जवाफ: "ओह, यसलाई दिउँसो बारेमा. म पेरिस दिउँसो माइकल ज्याक्सन संग पुट पुट प्ले समय मलाई सम्झना दिलाउँछ। "शब्द?
इमान्दारी पुर्वक, यो सिर्फ हुनत हामीलाई irk कि droppers नाम होइन. यो सामान्य मा घमन्ड गर्ने मानिसहरूको. हामी आफ्नो उच्च विद्यालय फुटबल दिन घमन्ड सुनेर हुर्केका मानिसहरूको थकित प्राप्त (यो अघि बढ्ने समय हो, सर). हामी उनीहरूले भ्रमण बारे हरेक विदेशी ठाउँ tweet केही बाटो पत्ता भन्ने हाम्रो सुअवसर मित्र को मलिन बढ्न. र हामी हाम्रो लागि विस्तार हरेक महंगा वस्तु तिनीहरूले खरिद गर्ने मान्छे को लागि धेरै धैर्य छैन (तिनीहरूले Rappers नहुन्जेल, को पाठ्यक्रम). Whether it’s covertly bragging about who you…